5 Best Fishing Places Na Europe Iji Enwe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Fishing Places Na Europe Iji Enwe
E nweghị ihe ọ nnọọ ka n'ịkụ azụ maka oge mbụ na a ebe ọhụrụ. N'ihi na ọ bụla angler, ma ịchọ ma ọ bụ jupụtara ahụmahụ, azu bụ a dị oké ọnụ ahịa ọrụ na-enyere ha zuru ike. Olee ihe pụrụ ịdị dịịrị ha mma karịa na ijikọta njem na ha mmasị egburu oge?
Ọ dabara nke ọma n'ihi na ndị na-enwe azu, enwere nnukwu ebe na Europe na atụmatụ a dịgasị iche iche nke azụ. Ọ bụrụ na ị na-na na na-eme atụmatụ iji mee ka gị ọzọ ezumike niile banyere azu, anyị nwere ike inyere gị aka ikpebi ebe aga. Ka anyị nwere a lee anya na anyị ndepụta 5 kacha mma azu Places na Europe na-enwe:
1. Fishing Places Na Sweden
Ọ bụrụ na ị chọrọ azụ na Sweden, i kwesịghị anya ukwuu n'ihu karịa Stockholm n'ihi na ihe uku azu ebe. Ọmụmaatụ, Stromgatan ziri ezi n'etiti obodo, na ya nwere a oké ele. I nwere ike ile anya nke Swedish nzuko omeiwu ụlọ ahụ ma na The Old Town mgbe azu. Ọzọ mepere emepe bụ ebe Hammarby Sjostad n'elu Hammarby ọdọ, a na-ewu ewu obi ke Stockholm. Ọ nwere ọtụtụ nnukwu azu ebe bụ nnọọ mfe si n'obodo.
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị chọrọ a ọzọ classic uwa azu ahụmahụ, ị ga-enweghị ụgbọala anya n'ebe Stockholm. Ringsjon Lake awade ụfọdụ mara mma azu ebe i nwere ike enwetaghị whitefish na egwurugwu trout. Drevviken bụ ihe ọzọ na jụụ ọdọ nso Stockholm, yiri Ringsjön. A ezigbo na adigide ebe azu, Drevviken Lake agaghị tụkwasịrị.
Ị nwekwara ike isi na Stockholm akipelago na n'àgwàetiti Galo, nke bụ ezi dịpụrụ adịpụ paradise. Ị nwere ike ịkwanye na azụ e gị obi ọdịnaya, ekpori akipelago odidi.
2. Fishing Places Na France
France bụ a mara mma mba n'ihi na dị nnọọ banyere ihe ọ bụla ọrụ, ya mere, ọ bụ ihe ijuanya na azu na France nwekwara oké. Otu n'ime ndị kasị a ma ama na azu ebe bụ Lac du Bourget, France kasị mie emie na kasị ọdọ. Ọ bụ otu nnukwu ebe n'ihi na ọ na ụlọ n'elu 30 ụdị azụ. N'etiti ha, trout, zander, Pike, na perch kwụpụta. Ọdọ bụ n'ezie a ọla nke Rhône-Alps region.
Mgbe ahụ e nwere Bassin d'Arcachon na ndịda ọdịda anyanwụ n'ụsọ oké osimiri nke France - n'ihi na ndị na-enwe saltwater azu. mara mma sunrises, mmiri doro anya, na bass mmiri bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị ị ga-atụ anya na Arcachon.
Anglers si mba ọzọ n'anya Lake Der-Chantecoq, ziri ezi obi nke Champagne region, dịtụ nso Paris. Ọ bụ oké ebe maka ndi bido, ọ bụ ezie na iri Uru agachi ọdọ n'ihi ibu azu kaapu. Ndị ọzọ ọwọrọiso French ebe gụnyere La Rance River na alder. Ma na-ewu ewu dị ka oké ebe gi onwe-gi ezinụlọ na a na azu njem.
3. Fishing Places Na Italy
Mgbe na Italy, i nwere ike dị ka nke ọma anya n'ihi na ụfọdụ ndị kasị mma azu ebe na Europe. N'ógbè Le Marche awade ụfọdụ oké azu, karịsịa na Cingoli, Pioraco, na Sefro. Ha na-na ụfọdụ nke ndị kasị mma Italian ọdọ mmiri egbu azu, nwere trout, Pike, na azu kaapu, ndị ọzọ na umu. Otú ọ dị, mgbe ọ na-abịa ọdọ mmiri, e nwekwara Lake Como elu ugwu, na ya Pike na perch.
Ka anyị ghara ichefu banyere nnukwu Italian osimiri, na Po. Ọ ụlọ ibu azụ okpo na nnukwu carps nke ga-arafu ọ bụla angler. na Tuscany, osimiri ndị kasị a ma ama na azu ebe. Lima na myọ dị ukwuu ebe azụ maka trout na grayling.
N'ihi na ndị na anglers na-ahọrọ azu na-emeghe mmiri, e nwere abụọ oké azu ebe ke Italy. The Egadi Islands nke Sicily na n'ụsọ oké osimiri nke Sardinia ga ma stun ị na ịma mma ha na àgwà azu ha na-enye. Lee maka-acha anụnụ anụnụ-nku azu tuna na Sicilian swordfish na Mediterranean, na amba-Jack, snapper, na Garrick na Tyrrhenian Sea.
4. Fishing Places Na The UK
The United Kingdom bụ a pụtara ebe, àjà ụfọdụ oké azu ebe n'ime emetọghị emetọ ọhịa mara mma nke agwe-etiti. Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe dị ịtụnanya catch, na UK pụrụ ịbụ nri unu ebe. Ma nke kwesịrị na ị bulie?
Otu n'ime ebe kachasị ewu ewu na Dartmoor, Devon. Na ihe dị otú ahụ evocative aha, i nwere ike aghaghị iche ahụmahụ nke azu maka agụụ na-agụ azụ na ọchịchịrị iyi. The osimiri Tyne na Northumberland nwere a na agba na-enye gị a iche uru megide oké osimiri trout ndụ e. Na-eme ka a osimiri zuru okè n'ihi na ìhè azu na nnukwu oké osimiri trout catch.
River Clettwr nso n'ókè nke England na Wales na-aga ịbụ ndị kasị mma ebe adventurers. Lee ọ gara n'ihu ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-arụ ọrụ ike maka gị catch na ike ike miri. Ọnọdụ bụ dịtụ ọzọ inweta na Strangford Lough, County Down. Ọ bụ UK kasị oké osimiri Loch nukọọrọ na makarel, pollock, na Haddock, n'etiti ndị ọzọ.
Assynt pụrụ ịbụ ihe kasị na-emenye ụjọ n'ebe niile - ọkụkọ n'okpuru nnukwu ugwu, na ma saltwater na freshwater azu nhọrọ. Fionn Loch bụ a akwa ebe na-azụ maka nwa afọ aja aja trout.
5. Fishing Places Na Germany
Germany N'ezie kwesịrị ya ebe ke ndepụta nke kacha mma azu ebe na Europe. Na ọtụtụ nnukwu osimiri na ọdọ mmiri, ọ ga-abụ a na-eche ma ọ bụghị ime ka ndepụta. Ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ebe maka n'ịkụ azụ Germany nwere na-agụnye na Danube ebe. na 8 Kilomita ogologo Bavaria Danube ebe, i nwere ike ijide a buru ibu di iche iche nke azụ.
N'ihi na ihe osimiri azu, na Rhine na Elbe, n'anya karịsịa na Baden-Württemberg na Saxony-Anhalt, karị, ahụmahụ bụ ịtụnanya. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ọdọ azu, e nwere bụ mgbe ọdọ Chiemsee na Lake Starnberg. Ma na-ezi miri, na ọtụtụ Pike, trout, na bream.
N'ihi na ihe niile anglers na oko njem, e nwere ụzọ na ikpokọta ha ukwu abụọ n'anya. Europe awade ọtụtụ ebe na-eme ka a oké catch na enwe ọdịdị na-ekwo ekwo n'obodo myiri.
Ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta ụfọdụ oké azu, e nwere ọtụtụ nnọọ mfe 5 kacha mma azu ebe na Europe na-enwe. Ọ bụrụ na ị dị njikere see mmiri, akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè ugbu a na adịghị anya azụ!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Fishing Places na Europe na-enwe” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-fishing-places-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#azu #traveleurope europetravel trainjourney travelgermany traveltips